Nyora All By Model
Multi Lane Kavha Mashini
Yechipiri Packaging Line
Case Apex Line
Nyora All By Application
Nyora All By Bag Rakaumbwa
4 divi rakavhara bhegi chiputiriso Machine
Pe monofilm bhegi chiputiriso Machine
Back chisimbiso bhegi kana gusset bhegi kurongedza muchina
Premade Zipper doypack bhegi kurongedza muchina
Pisitoni Filler-Liquid Pump
Otomatiki Chikamu Chekuisa chisimbiso + Muchina unodzikira Muchina
Volumetric Mukombe Kuzadza
Otomatiki Hura, Shuwa Yakatemerwa Pepa Bhegi Packaging M ...
Michina granule premade simukai homwe bhegi kavha ...
Yakazara Auto Mashoma Mashoma Kupinda Big Rakajeka Muromo rakarukwa S ...
Otomatiki Vertical Baling Machine, Diki Bags Kupinda Bi ...
Michina Chilli Upfu Premade homwe Bag Akapiwa Packagi ...
Multi lane syrup, muto musana yekuvhara chisaga bhegi packi ...
Yakazara Auto Mashoma Mashoma Mukati Muru Rakavhurika Muromo Yakarukwa Sacks Sekondari Packaging Machine
Automatic Bag Feeding Packaging machine (Double paShiro Type)
Production muitiro: sackets → chinjikira conveyor → Double materu conveyor → kumhanya conveyor → bhegi kuverengwa muchina → otomatiki bhegi dzichifura muchina → motokari wokusonesa → rakarukwa bhegi goho conveyor
Main hwokugadzira parameters:
1 kavha siyana: 150g ~ 1000g sachet zvigadzirwa
2. Packaging Materials paper bhegi, yakarukwa bhegi (mudungwe pamwe PP / Pe firimu)
3. Apex kumhanya: 4 ~ 14 dzakarukwa mabhegi / Maminitsi, (40 ~ 180 pouches / Nha)
(nokukurumidza zvishoma akashandura maererano zvinhu zvakasiyana)
4. chepamusoro chimiro: kuroorwa paShiro baiting, mutsara chete nekuisa
sackets → chinjikira conveyor → Double materu conveyor → kumhanya conveyor → bhegi kuverengwa muchina → otomatiki bhegi dzichifura muchina → motokari wokusonesa → rakarukwa bhegi goho conveyor
1 Packaging siyana: 150g ~ 1000g sachet zvigadzirwa
(nokukurumidza akachinja zvishoma maererano zvinhu zvakasiyana)
1. Hefei IECO Akangwara Midziyo CO., LTD (CHANTEC PACK) iri muHefei Guta, Anhui Province - rimwe remaguta anozivikanwa nesainzi nedzidzo muChina.
4. IECO gara uchiteera mwero we "kudzikisa kuputira mitengo, asi chengetedza hunhu".
5. IECO yakawana ISO9001 uye CE certification
6. IECO inogona kupa musuo nesuo chero kupi zvako pasi. Remote nhungamiro zvakare inogona kupihwa nesero uye network pamberi uye shure kwekutengesa.
1. Makore makumi maviri ane ruzivo rwekuzara auto kurongedza muchina
2. Hatina aifarirwa CE
3. 24hours masevhisi uye 12months vimbiso
4.Anogona kupa nyanzvi kune mhiri kwemakungwa kuti atumire
1..Q: Iwe uri fekitori kana kambani yekutengesa?
A: Isu tiri fekitori iri mudunhu reAnhui, guta reHefei. Uye isu tine mutengi mu Africa, Europe, South America, Asia uye North America. Ndokumbirawo mugovane zvido zvako zvekurongedza, ipapo tichaedza kukurudzira iwe muenzaniso wakakodzera uye yedu yekare yevatengi fekitori inoshanda vhidhiyo.
2..Q: Chii chako vimbiso yemuchina?
A: 1 gore kubvira muchina uchisvika kufekitori yevatengi.
3.Q: Sei uchitisarudza isu?
A: Ruzivo nehunyanzvi R & D timu, yakavimbika uye yakasimba yehurongwa hwekutonga mhando. Isu tinoedza zvigadzirwa zvedu zvese zvisati zvatumirwa kuve nechokwadi chese chiri mumamiriro akakwana.
4.Q: Unogona here kuronga matekiniki ako kuti aise mushini kwatiri?
A: Ehe, isu tichagadza mainjiniya edu kuti aende kunze kwenyika kunoisa michina yevatengi vedu. Uye kana iwe uine mainjiniya timu, isu zvakare tinopa kuraira bhuku reChirungu, zvikamu zvekusiya uye maturu ekumisikidza.
Previous: Otomatiki Vertical Baling Machine, Madiki Mabhegi Kupinda Big Pe Bhegi Kurongedza Bailer Machine
Next: Otomatiki Multifunctional Cartoning Machine yeCosmetics Ampoules uye Teabag
Sipo Powder kurongedza Machine
Otomatiki Robotic Simudza Uye Isa Case Case Packer
Address: NO.02658 3 # workshop 1st uriri Changning Ave.High hwemberi mukugadzira weruwa, Hefei, China
Phone: Tifonere izvozvi: +86 18656940167
Automatic huku essence seasoning stand...
Kubika katatu pazuva hakuparadzaniswe kubva kune ese marudzi econdiments. MuEast Asian cuisine, kuwedzera kune yakajairwa munyu uye soy muto, huku essence zvakare inonyanya kushandiswa yekurunga. Chinangwa chikuru chemuzinga ...
Otomatiki betel nut kurongedza muchina proce...
Areca nut inonyanya kugoverwa munzvimbo dzinopisa dzakaita seYunnan, Guangxi neHainan kuChina, uye inorimwa zvakanyanya munzvimbo dzinopisa dzeAsia seIndia, Myanmar neVietnam. Vanhu vemunzvimbo idzo vanga vaine tsika yeku cons...
Kukwidziridzwa kweindasitiri yechikafu chezvipfuyo kuri ins...
Mumakore achangopfuura, nekuda kwekukura nekukurumidza kwemusika weindasitiri yezvipfuyo, mukana wemusika weindasitiri yechikafu chezvipfuyo wakaburitswa nekukurumidza. Muchikamu chechikafu chemhuka, kushandiswa kwePET chikafu chekudya ...
Food kurongedza Machine , kavha Machine , kurongedza Machine , Upfu Apex Machine, China kurongedza Machine , Automatic Apex Machine ,